Maxaan samayn karaa ee naftayda ku caawiyaa?
Author Topic: Maxaan samayn karaa ee naftayda ku caawiyaa? (Read 14563 times)
« on: April 01, 2008, 01:48:32 AM »
Xanuunka diiqaddu wuxuu leeyahay sifo aad u muhiim ah markaad doonaysid in aad ka adkaato. Diiqaddu iyadaa is quudisa. Waad diiqaysaa ka dibna waad sii diiqaysaa marka ogaatid in aad xanuusanaysid. Fekradaha aad dhinaca xun wax ka eegayso ayaa kugu soo noqnoqonaya, waayo way kaaga adkaanaysaa in aad iska difaacdo. Xaaladan aad ku sugantahay ee diiqada ayaa markaa ka waynaanaysa, ciladii markii hore keentay. Mid aad u muhiim ah ee ah in aad ogaatid waxa weeye in aanay jirin xal diyaar ahi. Xalilida mushkiladanu waxay u baahantahay waqti, awood, iyo shaqo. Marka aad niyad jabsantahay ma lihid awood ama niyad aad ku shaqaysid. Laakiin hadii si firfircoon uga qayb qaadato dawaynta hadalka ah, waxa laga yaabaa in ay arintan kaa caawiso.
Waxa muhiim ah in aad tijaabiso in aad jebisho ciriiriga uu kugu hayo diiqaddu. Waa inad jebisaa xeernaanta dhinaca xun aad wax ka eegaysid. tijaabi in markaad ku fekeraysid (dhinaca xun) in aad ku bedesho mid dhinaca fiican ah. Eeg waxyaalaha maskaxda kaa mashquuliya. In kastoo laga yaabo in aad jeclaysan, tijaabi ka qayb qaadshada ciyaaraha, waa dawayn fiican. Ciyaarista, orodada, boodada, baaskeelada, iyo xataa socodka iska war wareegu wuxuu dhiiri geliyaan kimikal la yidhaahdo ‘endrophins’, taas oo kaa kalmeenaya in aad fiicnaato.
Waxaad u baahantahay waxyaalaha hagaajinaya sida dareenka naftaadu yahay. Tijaabi in aad naftaada hagaajiso. Waad in aad jidhkaaga ilaalisaa – si fiican wax u cuntaa. Mijo baxsataa, waa in aanad naftaada wax ku yeelin sigaarka, khamriga, ama maan dooriyayaasha kale. Eeg sidaad u eegtahay, oo qurxi aragaaga.
Wixii su'aalo iyo faahfaahin ah halkaan ku weydii
Views: 49028 April 29, 2016, 09:52:03 PM
Views: 26251 January 06, 2012, 10:02:19 PM
Views: 24301 December 08, 2012, 08:59:58 PM
Views: 86957 April 08, 2011, 09:07:47 PM
Views: 15955 February 15, 2016, 05:22:18 PM